एक वर्षभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार हुन्छ : डिल्लीराम अधिकारी [भिडियो अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ सोमबार, असार ९, २०७६, १७:२८
काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय लय समाउन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षका तुलनामा चालू आवमा टेलिकमको आम्दानी र नाफासमेत घट्ने निश्चित भइसकेको छ।
टेलिकमले फोरजी सेवा सुरु गरेको १८ महिना भइसक्दा पनि उपत्यका र पोखराभन्दा बाहिर सकेको छैन। यसैगरी टेलिकमले पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटबीचमा पर्ने पहाडी जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको छ।
यो क्षेत्रमा फाइबर लाइन विस्तारका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरको दुई वर्ष हुन लागेको छ। तर यसको खासै प्रगति भएको छैन। यही सेरोफेरोमा रहेर टेलिकमले गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा नेपाल लाइभका सुमन शर्माले टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः
टेलिकम त बिरामी परेको छ भन्छन् नि? कसरी उपचार कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
नेपाल टेलिकम अहिले उच्च गतिका साथ हरेक क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ। हामी बजारमा एकदमै आक्रमक रुपमा सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधामा सहुलियत दिने काम अगाडि बढाएका छौं। यसकारण हाम्रो अवस्था मजबुत र कुशल रुपमा बढिरहेका छ।
कस्ता क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर टेलिकमले काम अघि बढाइरहेको छ?
सबैभन्दा पहिलो प्राथमिताको काम भनेको फोरजी सेवा विस्तार हो। यो महत्वकांक्षी परियोजनाअन्तर्गत एक वर्षभित्र देशभर नै फोरजी सेवा विस्तार गर्ने गरी हामीले काम थालेका छौं। झन्डै एक वर्षदेखि यो परियोजनाको काम विभिन्न कारणले रोकिएको थियो।
यसलाई अहिले फुकाउने काम सकेर ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको आयोजना एक वर्ष भित्रै सक्ने गरी काम थालनी भइसकेको छ। केही प्राविधिक कारणले हामीले एक वर्षको सयम कामै नगरी खेर पनि फाल्नु परेको थियो।
अहिले हामी छिटो बजारमा जान एक वर्षमै पूर्वाधार विकासका काम सक्ने गरी ३ कम्पनीसँग बेग्लाबेग्लै सम्झौता गरिसकेका छौं। अहिले द्रुत गतिमा काम पनि भइरहेको छ।
अर्को मध्य पहाडी राजमार्गमा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेपनि अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम अगाडि बढाउन सकेका थिएनौं। अहिले यो काम पनि सुरु भएको छ। यसले सामाजिक रुपान्तरणमा ठुलो सहयोग गर्छ।
एफटीटीएच सेवामा हामीले योजना बनाउने तर, कार्यान्वयनमा नजाने विगतको अवस्था सुधार गरी कार्यान्वयनमा लगिसकेका छौं। हामीले एक करोड जिएसएम लाइन विस्तारका लागि पनि ७ सय २६ वटा बिटिएस टावरको अन-एयर गरिसकेका छौं। जसका कारण हाम्रो नेटर्वक कभरेजमा पनि सुधार आएको छ। यसैगरी भ्वाइस कल तथा डाटा सेवाको पहुँच बढिरहेको छ।
हामीले पछिल्लो समय गुणस्तर सुधार सँगसँगै नेटर्वक विस्तारको राजस्व संकलनमा समेत सुधार गर्न सफल भएका छौं।
मोबाइल सेवाको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक सुधार आइसकेको छ। तर, फोरजी विस्तारको काम चुनौती पनि छन्। जसमा पनि हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा केही जटिलता छन्। जटिलता तोड्दै समयमै काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य हो।
यी विषयसँग हामीले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँग फोरजी विस्तारको भइरहेको प्रगति, अप्टिकल फाइबर विस्ताराको काम, टेलिकमको सेवा र गुणस्तरलगायतका विषयमा गरेको कुराकानी विस्तृत भिडियोमाः
भिडियो/तस्बिर : सौरभ रानाभाट